Canshuur lagu soo rogey shisheeyaha jooga dalka Sacuudiga . | Jamaame News Network
Taasi oo ka dhigan reerkii ka kooban 6 ruux , waxaa laga doonayaa bil walbo RS600 bil walbo taasi oo ka dhigan dhamaadka sanadkaan waa inay bixiyaan RS3600=us$972./
Tani waa mid loogu daneynaayo sida ku xusan tabta toosinta dhaaalaha amase habeenta dhaqaalaha ee uu soo jeediyey ina Salmaan oo maanta ah dhaxal sugaha boqortooyada ee la magac baxay : “Aragtida 2030.”
Aragtidaa kasoo yeedhey xil sugaha Boqortooyada ayaa ah mid si gaar ah loogu duubtey maamul ahaan, si loo muujiyo, taa oo ahayd mid loogu diyaarinaayo xil sugaha oo markaa ahaa xil sugaha labaad.
Aragtidaani ayaa noqotey mid Social Mediaha si xoog leh looga hadlo, taasi oo qof walbo uu kasoo dhiibtey aragtidiisa, hase yeeshee xagga nidaamka iyo intii raacsan ayaa u dhigo inay tillaabadaani ay tahay mid danta iyo maslaxada dadweynaha Sacuudiga ay ku dhismidoonto.
Tani oo ay kasoo baxeen aragtiyo kala duwan, taasi oo ka dhalatey odhaahda xil sugaha oo ahayd, waa inuu dalka Boqortooyada ka xuroobo, ku tiirsanaanta dhaqaalaha Bitroolka ku saleysan, taasi oo ah waa inuu dalka yeeshaa dhaqaale ka xor ah, bitoorlka.
Saa darteed waxaa dalkaani jooga in dhan 12 Milyan oo shisheeye ah, kuwaasi oo ilaa 4 milyan ay yihiin dhallinyero amase carruur, oo aan dalka wax soo gelin, aanan loo oggoleen inay shaqeeyaan.
Haddaba waa in dalka uu ka faaiido, taasi oo keentey in la saaro canshuurta kor ku xusan.
Waxaa lagu xisaabtamey inay kaso gelidoonto dalka lacag dhan ilaa 8 milyaar dollar, hase yeeshee waxaa la woda ogyahay inay in badan dalka ka bixidoonaan, taasi oo la filaayo inta baxeyso ay fursad ballaaran siindoonaan dhallinyerada Sacuudiga oo shaqo la’aanta inta ay haayso oo gaaraayo 12% .
Aragtiyada kala duwan ayaan marna joojindoonin, tillaabadaa qaar badan uleys ku ah shisheeyaha dalka joogo, hase yeeshee waxaa keli u bannaan inay bixiyaan canshuurta amase ay dalka iskaga baxaan.
Waxaa go’aankaa dhinac socdo go’aan ah “ Dal aan lahayn dad bilaa sharic ah” taa oo ah inaan marna uusan ku noolaan qof aan dalkaani sharci ku leheen.
Waxaa in badan leys weydiiyaa “ Dalkaani haddii laga woda saaro dadka aan sharci leheen, isla markaana laga saaro inta aan woda shaqeynin, noloshu sideybay ahaandoontaa?
Jawaabo kala duwan ayaa kasoo baxo, hase yeeshee waxaa hubaal ah, inuu dalka cadhiidhi adag uu ka jiri doono ilaa waqti hase yeeshee taasi hadday u dulqaataan, labada dhinac dhinac dadka dalka u dhashey iyo shisheeyahaba , dalka waa u dan haba ahaato waqti dambe, hase yeeshee miyay u dulqaadandoonaan dhibaatooyinka saansaantooda soo billaabatey, ay ka mid tahay..guryaha oo inta badan woda bannaan, taksiyada, dukaamada, suqqyada oo ay ka muuqato dad la’aan.. hase yeeshee waa dhamaandoontaa sida loogu tala galey..
Shisheeyaha aan laga dooneynin , amase loo daayey waxaa ka mid ah, dadka kasoo jeedo “ Falastiin, Siirya, Yeman, Boorma” inta kale waa ay bixinayaan canshuurta”.kuwaasi oo la doonaayo inay tegaan Baasaboorrada meesha laga bixiyo, oo waraaqdooda loogu qoraayo waa cafis..